माख्लाघरे भाउजु र भ्यालेन्टाइन - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
भ्यालेन्टाइन डे र नेपालमा यसको महत्व
‘मदीराका पारखीहरुले भन्ने गर्दछन आज मौसमले च्यालेन्ज गरेको छ त्यसैले एक प्याक त नलिई हुन्न’ । वास्तवमा मौसमको के हिम्मत कि मानिसलाई च्यालेन्ज गर्ने । मौसम त प्राकृतिक नियम हो कहिले घाम, कहिले पानी, कहिले झरि ,कहिले वादल यस्तै नै हुन्छ । प्रत्येक वर्ष झै यस वर्षको फेव्रवरी १४ तारिखमा पादरी सेन्ट भ्यालेन्टाइनको सम्झनामा विश्वभर भ्यालेन्टाइन डे मनाइन्छ । पछिल्लो समयमा यो सप्ताहव्यापी रुपमा मनाउन थालिएको छ । विश्वका अन्य मुलुकमा झै नेपालमा पनि यूवापुस्ताको च्यालेन्जको रुपमा देखा परेको छ ।
भ्यालेन्टाइन डे अर्थात प्रणय दिवसलाई जति फराकिलो अर्थमा परिभाषीत गर्दे गए पनि वास्तवमा भन्नु पर्दा यो माया गर्न जोडिहरुको लागी वसन्त ऋतु नै हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । त्यसैले होला नेपालमा पनि भ्यालेन्टाइन डे शुरु हुने एक महिना अघि देखिनै चोक, गल्ली, वजार, पार्क, रेष्टुरा आदिमा चहल पहल एकदमै बाक्लो देखिएको छ । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि नेपालमा पनि भ्यालेन्टाइन डे को महत्व र प्रभाव दिनानुदिन वढ्दो छ । तर हाम्रो नेपालमा चरम गरीबी छ यहाका केही प्रतिशत मानीसहरु बाहेक अधिकांश गरिबीको जीवन बाच्न बाध्य छन । यस्तो अवस्थामा शहरी क्षेत्र बाहेक ग्रामिण भु -भागमा भने यस्ता खालको संस्कृतीको खासै असर देखिन्न । त्यसैले होला प्राय शहरिया मानिसको जीवनको अभिन्न अंग बनेका छन यस्ता चाडपर्वहरु ।
प्रेम प्रकृतिको सुन्दर उपहार
वास्तवमा भन्ने नै हो भने प्रेम प्रकृतिको सुन्दर उपहार हो । प्रेम प्रकट गर्नलाइ पनि कुनै समय , काल ऋतुको आवश्यकता हुन्न । प्रेमको कुनै मौसम हुन्न ,प्रेम गर्नलाई जसरी जात भात, रंग भेद ,धनी गरिवले कुनै फरक पार्देन त्यसरी नै प्रेम दर्शाउन र प्रकट गर्न शाईत हेरेर कुनै डे कुर्नु पर्देन । यद्यपी नेपालको सवालमा भने मदीरा पिउनेहरुलाई मौसमको वहाना भनेझै भ्यालेन्टाइन डे को वहाना भएको छ । आज आम यूवा जगतको आकर्षणको पर्व बनेको छ यो ।
आपसी विश्वास र समझदारी विनाको मायाँ नुन विनाको अचार
भनिन्छ नारी पुरुष एउटा रथका दुई पांग्रा हुन । ति दुई पांग्रा मध्ये एउटामा मात्र खरावी आए पनि रथ गुड्दैन तसर्थ नारी पुरुष विच एक अर्कामा प्रेम कायम राख्नु र सम्वन्ध राख्नु अत्यन्त आवश्यक छ । त्यसमा पनि सबै भन्दा ठुलो कुरा हो विश्वास र समझदारी नै हो । आपसी विश्वास र समझदारी विनाको मायाँ नुन विनाको अचार जस्तै हो ।
के भ्यालेन्टाइन डे मनाउनै हुन्न त ?
अव यहाँ प्रश्न आउछ, के भ्यालेन्टाइन डे मनाउनै हुन्न त ? अवश्य मनाउन हुन्छ यस्ता संस्कृतिले आपसमा सम्वन्ध विस्तार गर्न सहयोग पुराउछ तर, हिजोआज तन्नेरी मात्र नभई बिवाहीत जोडी पनि भ्यालेन्टाइन डे को संस्कृतितर्फ आकर्षित भइरहेका छन् । यस्ता विवाहित जोडीहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने,श्रीमतीलाई एकदिन फाइभस्टार होटलमाच लगेर लन्च र डिनर गराउदैमा भ्यालेन्टाइन डे मनाएको अर्थ रहन्न । साच्चिकै भ्यालेन्टाइन हुन त बर्षदिनभरी नै श्रीमान् श्रीमती, विच अटुट माया, अगाढ विश्वास एवं आत्मियता र घनिष्ठताको सम्बन्ध हुनु जरुरी छ ।
यसै प्रसंगमा नेपालमा भ्यालेन्टाइनको संस्कृति शहरका हुने खाने र धनाढ्य वर्गमा बढी प्रचलित छ भन्ने कुराको उदाहरणको लागि मेरो गाँउको एउटा प्रसंग ल्याउन चाहन्छु । अझै पनि मेरी माख्लाघरे भाउजु सुत्केरी भएको दश दिन पनि वित्न नपाउदै बडेमानको गाग्रि लिएर सकि नसकी पधेरामा पानी लिन आउन वाध्य छिन बर्षदिनमा एकपटक घास काट्ने हसियाले कपाल चुटुचुटु काट्छिन, तिनलाइ के थाहा कुन चराको नाम हो ?। तिनलाइ के थाहा भ्यालेन्टाइन डे कै दिनमा काठमाडौमा करोडौंको क्रिम पाउडर र सेन्ट पनि बिक्री हुन्छ भनेर । अनि रक्सी खाएर श्रीमानले कुटेका निलडाम हरु शरिर भरि बोकी हिडेकी माख्लाघरे लाहुरीनी दिदीलाइ के थाहा कि शहरमा ठूल्ठूला सुविधा सम्पन्न अस्पताल पनि छन भनेर । यतिमात्र कहाँ हो र डाँडाघरे साँइला दाइको श्रीमती त श्रीमानले तेल ल्याउछ र साग पकाउँला भनेर कुरी बसेकी हुन्छीन । तर, अफशोच कमाएको एक दुइ सयको पनि जाँड धोकेर अलिअलि ल्याएको किनमेल पनि बाटोमै छरिएर घरसम्म कहाँ पो आइपुग्छ र ? । उनी भने रातभरी श्रीमानको पर्खाइमा हुन्छिन तिनलाइ के थाहा भ्यालेन्टाइन डे ।
भ्यालेन्टायन डे एउटा फेसन मात्र हो कि ?
भ्यालेन्टाइन डे मनाउनु राम्रै कुरा हो तर यसका पनि धेरै बिकृती विसंंगती छन । आधुनिक पुस्तामा प्रेम सम्वन्धि गलत बुझाइका कारण दिनानुदिन यस्ता विकृती बढ्दै पनि छन । जसको मुख्य कारण प्रेमलाइ सेक्ससंग दाजेर बुझ्नु पनि एक हो । हिजो आजका युवा पुस्ताले प्रेमलाई यती सस्तो मनोरज्जनको साधनको रुपमा लिएका छन् कि आज प्रेम भोलि विछोड, भोली प्रेम पर्सि विछोड । हिजोआज त दैनिक कपडा फेरेझै प्रेमी र प्रेमीका फेर्न समेत पाइएको छ । भ्यालेन्टाइन डेकै दिन कतिका प्रेमी प्रेमीका परिवर्तन हुदा रहेछन् । वास्तवमा प्रेम आकर्षण मात्र होइन प्रेम त जीवन हो भन्ने कुरा यिनले खै बुझेका ? हिजोका दिनमा रोमियो जुलियट , लैला मज्नु , हिररान्जा,मुना मदनले गरेको जस्तो प्रेम त अव कितावका पन्नामा मात्र सिमीत हुन लागिसकेको छ । यस अर्थमा आधुनिक पुस्ताको प्रेम र भ्यालेन्टायन डे एउटा फेसन मात्र हो कि भन्ने पनि अनुमामन लगाउन सकिन्छ ।
कृतिम गुलावको रातो फुल साट्ने मात्र हैन जीवनलाइ पनि त्यहि रातो गुलाव झै बनाऔ
आधुनिक नेपाली समाजमा विभिन्न चाडपर्वहरु मनाउने शैलीमा केहि परिवर्तन भएको छ । हामी हाम्रा हिन्दु सनातन धर्ममा चलिआएका चाडपर्वहरु त मनाउछौ नै यसका साथै केहि विदेशी चाडपर्वहरुलाइ पनि अलि बढि नै महत्वका साथ मनाएको पाइन्छ । बिदेशी चाडपर्व जसले समाजमा सकारात्मक सन्देश दिन्छन ति चाडपर्वको अनुशरण गर्नु कुनै नराम्रो कुरा होइन बिश्वव्यापी करणको यो प्रकृयालाइ कसैले चाहेर पनि रोकिन्न । तैपनि बिदेशी चाडपर्व मनाउने जोडतोडमा नेपाली संस्कृती र परम्परालाइ भने विर्सनुहुन्न । भ्यालेन्टाइन डे , क्रिस्मस र अप्रिल फुल मात्र हैन मातातिर्थे औंशि , दशैं, तिहार ल्होसार , छठ , इद जस्ता हाम्रा चाडपर्वलाइ पनि हार्दिकताका साथ मान्ने गरौं । जसले गर्दा भोलिका सन्ततीमा पनि नेपाली धर्म,संस्कृती र चाडपर्वका बारेमा ज्ञात होस र यूगौं यूग सम्म धर्म संस्कृती र परम्परा नमरोस । अन्तमा भ्यालेन्टाइन डे का दिन कृतिम गुलावको रातो फुल साट्ने मात्र हैन जीवनलाइ पनि त्यहि रातो गुलाव झै बनाऔ आपसमा प्रेमभाव बढाऔ ।